उपनिर्वाचनका लागि समाजवादी पार्टीले टुंग्यायो उम्मेदवार
काठमाडौं, कात्तिक १७–उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपालले आगामी १४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले एक प्रतिनिधिसभा सदस्य र दुई प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो ।
समाजवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा कास्की २ मा धर्मराज गुरुङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । सो क्षेत्रको लागि पार्टी प्रदेश कमिटीले रामबहादुर नेपाली, किरण थापा र गुरुङको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
पार्टीले दाङको क्षेत्र नं. ३ को ‘ख’ मा डिल्लीबहादुर डाँगी र बाग्लुङ २ ‘ख’ मा अशोककुमार विकलाई प्रदेश सभासदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीले भक्तपुर क्षेत्र नं. २ को ‘ख’ प्रदेश सभासदको नाम छनोट गर्न सकेको छैन ।